Mobile Device Troubleshooting 1
SQL Query Analyzer.
ဒီနေ့ အလုပ်လုပ်ရင်းကြုံလိုက်ရတဲ့ ပြသာနာတခုပါ။ ပရိုဂရမ် အလုပ်လုပ် နေတဲ့ mobile device က SQL Query Analyzer ကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ ဗိသုကာ( Programm Architect) ကို မေးကြည့်တော့ တချို့dlls တွေကိုသွင်း ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ သူပြောတဲ့ dlls တွေက-
၁. sqlce30.dev.ENU.ppc.wce5.armv4i.CAB (*)
၂. sqlce30.ppc.wce5.armv4i.CAB (**)
တို့ ပါဘဲ။ mobile device ထဲမှာက SQL Query Analyzer က ရှိကို မရှိတော့တာ။ ဒါနဲ့sqlce30.dev.ENU.ppc.wce5.armv4i.CAB ကို သွင်းကြည့်လိုက်တယ်။ SQL Query Analyzer ကို မြင်လာရတယ်။ OK ပြီဆိုပြီး Database ဖိုင် (.sdf) ကို ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ အမှား တွေတက်လာပါတယ်။ အမှားသတိပေးချက်( Error Message) ကတော့ -
Failed to initialize the provider. Please make sure that SQL Server
Mobile Edition is properly installed
ပါတဲံ။နည်းစနစ်ဆိုင်ရာဗိသုကာ (program Architect) ကလည်း ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာမသိဘူး။ ဒါနဲ့ဆက်လက်ရှာဖွေမိတယ်။ ဒီလို နဲ့ တွေ့ ပါတယ်။
ကို သွင်း (install) ပါတဲ့။ ဒီ .CAB ဖိုင်ကို သွင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ အားလုံး အဆင် ပြေသွားပါတယ်။
C:\_Program Files\_Microsoft Visual Studio 8\_SmartDevices\_SDK\_SQL Server\_Mobile\_v3.0\_wce500\_armv4I
။ ။ Mobile မှာ ဒီ ကဘ်(.CAB)တွေကို ဘယ်လို သွင်းရမှန်းမသိသူတွေအတွက်ပါ။
Mobile မှာ သွင်း(install) ရတာလွယ်ပါတယ်။ သွင်းချင်တဲ့ ဖိုင်တွေကို Mobile ရဲ့Explore Root အောက်တဲ့တဲ့မှာ သွားထားပါ။ Mobile Explore ကို ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် ပုံမှန် ကွန်ပြုတာရဲ့Explore ကနေလည်းသွားလို့ ရသလို ၊ Microsoft ActiveSync သုံးရင်းလည်း သူ Icon ကို ကြွက်ရဲ့ ညာကို နှိပ် ပြီး Explore ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ ခုနက (.CAB) ဖိုင်တွေကို Root အောက်မှာဘဲ Copy/Paste လုပ်ချပါ။
ပြီးရင် Mobile ထဲကနေ ပြီး ခုနက ဖိုင်တွေကို သွား ပြီး Run ပါ။ အောင်အောင်မြင်မြင် သွင်း(install) လို့ ရတယ် ဆိုရင် Successfully insatlled ဆိုတာပေါ်လာပါမယ်။ ။
Posted by akela at 2:14 PM
Labels: mobile troubleshooting
Mobile Device Troubleshooting2Unable to Debug/Tr...
ရေးသူ - သန့် ဇော်မင်း နေ့ စွဲ - july 26,2007 ----...
Mobile Device Troubleshooting 1 SQL Query Analyzer...
Regular Expression (စကာလုံးအစုပုံစံ) စကား...
စကားလုံးအစုပုံစံ ၀ါကျ (Regular Expression Syntax) ...